Posted by Bwarsara | Monday, May 07, 2012 | သမိုင်း |0comments »
ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခမ်းထီသည် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်တလုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီလုံရွာနေ ပအိုဝ်းပိန္တောဆေးဆရာ ဂျန်ဖာစာရိန္တနှင့် ဂျန်မွိုးလဲုင်းတို့မှ ဖွားမြင်သည့် သားသ္မီး(၁၁)ဦးအနက် ဒုတိယအငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်။ အောင်ခမ်းထီ၏ ငယ်မည်မှာ ခွန်ကီး ဖြစ်သည်။ အောင်ခမ်းထီသည် (?)ခုနှစ်တွင် နန်းဖျူးနှင့် အိမ်ထောင်ကျ၍ သားသ္မီး(၆)ဦးထွန်းကားပြီး ၎င်းတို့မှာ နန်းလုံခမ်၊ ခွန်စိန်မင်း၊ ခွန်အောင်းကျေား၊ အောင်းခမ်း၊ နန်းခံရွဉ်၊ ခွန်အောင်းခမ်းကွို တို့ဖြစ်သည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ ဆိုသည့် ဝေါဟာရ ပေါ်ပေါက်လာပုံ
Posted by Bwarsara | Saturday, February 18, 2012 | သမိုင်း |0comments »
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအနက် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားသည် နှစ်စဉ်တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် ကျင်းပကြသည်။ တပေါင်းလပြည့်နေ့ကို ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ ဆိုသည့်ဝေါဟာရက ဘယ်လိုစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည် ကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ် လာပါသည်။
မဟာသက္ကရာဇ် (၂)ခု (ခရစ်သက္ကရာဇ်မပေါ်မီ ဘီစီ ၆၉၀)တွင် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိသထုံပြည့်ရှင် သက္ကရာဇာမင်းနှင့် မိဖုရား ဘဒ္ဒကလျာဒေ၀ီတို့မှ သားတော်တပါးဖွာမြင်ခဲ့သည်။ ထိုသားတော်သည် တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် နေတွက်လ၀င်အချိန်၌ ဖွားမြင်သောကြောင့် သူရိယစန္ဒာ ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ သူရိယစန္ဒာသည် သက်တော် ၂၄ နှစ်တွင် ဖခမည်းတော် ထီးနန်းအပ်ပြီး နန်းစံချိန် ၁၀ နှစ်တွင် ဖခမည်းတော် သက္ကရာဇာမင်းက နတ်ရွာစံလေသည်။ ဗုဒ္ဓဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၁၁ ခု သီတင်းကျွတ်လတွင် သူရိယစန္ဒာမင်းအုပ်စိုးသည့် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိသထုံပြည်သို့ ပထမအကြိမ် ကြွရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုနှစ်အတွင်း သူရိယစန္ဒာမင်း၏ မွေးနေ့ဖြစ်သော တပေါင်းလပြည့် ၌ ရွှေဆံရီစေတီတော်ကို စတင်အုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှစ၍ ပအိုဝ်းလူမျိုးတို့သည် ဗုဒ္ဓဓမ္မ တရားရေစက်ကို စတင်ကြားနာရရှိပြီး ဗုဒ္စဘာသာကို စတင်ကြည်ညိုကြသည်။ သူရိယစန္ဒာမင်း လက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၂၀ တွင် ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၂၈ တွင် တတိယအကြိမ်အဖြစ်လည်းကောင်း သထုံပြည်သို့ ကြွလာခဲ့သည်။
သူရိယစန္ဒာမင်းလက်ထက်မှ စ၍ ပအိုဝ်းလူမျိုးတို့သည် နှစ်စဉ်တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ရွှေဆံရံစေတီ ရှိရာသို့ သွားရောက်ပြီး ကောက်သစ်ပူဇော်ခြင်း၊ ဆွမ်းကပ်ခြင်း၊ ငါးပါးသီလခံယူခြင်း စသည့်ပွဲတော်များကို နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာမှ ၁၉၄၇ ခု မတ်လတွင် ဖဆပလ၏ မြေယာခွဲဝေရေး ပေါ်လာစီကို စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် သထုံဒေသရှိ လယ်ယာမြေအမြောက်အများကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သထုံဒေသရှိ ပအိုဝ်းလယ်သမား ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း)ကျော်က သထုံမြို့ရှိ ဖဆပလ ကော်မရှာနာရုံးသို့ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲသည် အောက်ပါ အဆို (၃)ရပ်ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ပအိုဝ်းလူမျိုးကို တောင်သူဟု ခေါ်ဆိုရေးသားခြင်း မပြုဘဲ ပအိုဝ်းဟုသာ ခေါ်ဆိုရေးသားရန်။
မြေယာခွဲဝေရေး ပေါ်လာစီကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်။
ဗမာ့တပ်မတော်တွင် ပအိုဝ်းတပ်ရင်း (၂)ရင်း ထူထောင်ပေးရန် စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ထိုအဆို(၃)ရပ်ကို ပအိုဝ်းလူမျိုးကို နောက်နောင်တွင် တောင်သူဟု ရေးသားခေါ်ဆိုမှု မပြုရန် စသည့် ပထမအချက်ကိုသာ ဖဆပလ က လိုက်လျော်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ သူရိယစန္ဒာမင်း၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အောင့်မေ့သည့်အနေဖြင့် ၎င်း၏ မွေးနေ့ဖြစ်သော တပေါင်းလပြည့်နေ့ တွင် မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းရှိ ပအိုဝ်းလူမျိုးများက ရွှေဆံရံစေတီရှိရာသို့ ချီတက်ပြီး ကောက်သစ်ပူဇော်ပွဲမှ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပအိုဝ်းလူမျိုးများက ပဒေသရာဇ်စနစ်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက် ၀ပ်ဝပ်ပြားခံနေရကြောင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ကို ကျင်းပမှု မပြုလုပ်ဝံကြပေ။
၁၉၅၉ တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပဒေသရာဇ်စနစ် ကျင့်သုံးသည့် စော်ဘွားများက မိမိတို့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရသို့ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၆၀ တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူမျိုးစုအသီးသီးက လက်နက်စွဲကိုင်သည့်လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးပြီး တော်လှန်ရေးဆင်နွဲခဲ့သည်။ ထိုနောက် ပအိုဝ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသော သထုံဦးလှဖေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ချန်ဇုံ၊ ဦးကျော်စိန်တို့က အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၏ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၆ တွင် ဗိုလ်ချုပ်စံသိန်းဦးဆောင်သော ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ပအလဖ)ကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် ပအလဖ အမည်ကို ရှမ်းပြည်နယ် လူမျိုးပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ရလလဖ) အမည်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရလလဖသည် လူတန်းစားကို အခြေခံသည့် အဖွဲ့ဖြစ်၍ ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် အခွင့်မသာခဲ့ပေ။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သည့် ရလလဖ ခေါင်းဆောင်တချို့က ရလလဖမှ ခွဲထွက်ပြီး ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပီအဲန်အို) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ တွင် ပီအဲန်အို၏ ပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ်ညီလာခံတွင် တပေါင်းလပြည့်နေ့ကို ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြန်မာပြည်အနှံအပြားရှိ ပအိုဝ်းဒေသများတွင် နှစ်စဉ်တပေါင်းလပြည့်နေ့ကို ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် ကျင်းပလာကြသည်။ ထိုအပြင် တက္ကသိုလ်များရန်ကုန်နယ်မြေနှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်နယ်မြေများပေါ်တွင် ပအိုဝ်းကျောင်းသားများက ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပလာကြသည်။
၂၀၀၇ အတွင်း တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့၏ နောက်ဆုံးရက်(၂၊ ၀၃၊ ၂၀၀၇) တွင် နိုင်ငံခြားအဲန်ဂျီအိုများ၊ ဒေသခံအာဏာပိုင်များ လာရောက်အားပေးမည်ဖြစ်၍ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ စတိတ်စဉ်၏ နောက်ခံဆိုင်းဘုတ်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသော Pa-Oh National Day ဆိုသည့်စလုံးကို ခွာထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုနှစ်မှ စပြီး နှစ်စဉ်ကျရောက်သည့် တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ စာလုံးအစား ပအိုဝ်းအမျိုးသားပွဲတော်အဖြစ် ရေးသားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အသစ်တက်လာသည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် မွန်အမျိုးသားနေ့ကို ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ပေးသည့်နည်းတူ လာမည့်တပေါင်းလပြည့်နေ့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့တွင် Pa-Oh National Day နှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ ဆိုသည့် စာလုံးကို စတိတ်စဉ်၏ နောက်ခံဆိုင်းဘုတ်ပေါ်တွင် ပြန်လည် ရေးသားခွင့် ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
၂၀၀၅ တွင် အသက်(၈၀)ကျော်ရှိ ကော့ကျိုက်ဇာတိ မွိုးဖြားဗွာ (ခ)ဒေါ်ဖြူ၏ ၎င်း၏ အပျိုပေါက်စဘ၀တွင် သထုံ၌ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ သွားအားပေးသည့်ပုံ ပြန်ပြောပြချက်များ။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကလောမြို့ ပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာကို PNO ၀င်ပြိုင်မည်
Posted by Bwarsara | Friday, February 10, 2012 |0comments »
လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့နယ်မှ လှစ်လပ်နေသော ပြည်သူ့လွတ်တော် တစ်နေရာကို ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO)က ၀င်ပြိုင်မည်ဟု သိရသည်။
“ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လှစ်လပ်နေသော ကလောမြို့ ပြည်သူ့လွတ်တော် တစ်နေရာကို ၀င်ပြိုင်ရန်အတွက် PNO အနေဖြင့် ဦးခွန်သန်းမောင် (ခ) ခွန်ပေါလိုင်းကို လျာထားပြီး ဖြစ်တယ်။မနက်ဖြန် တဘက်ခါဆို PNO စည်းရုံးရေး စဆင်းတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကြံခိုင်ရေးပါတီက လွဲရင် တခြားပါတီတွေက စည်းရုံးရေးဆင်းတာ မတွေ့ရသေးဘူး” ဟု PNO ခေါင်ဆောင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကြံခိုင်ရေးပါတီမှ ဦးမြ၀င်း၊ SNDP မှ စ၀်သာဦး၊ တစညမှ ဦးခင်မောင်လှနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းငွေ တို့သည် ကလောမြို့ လှစ်လပ်နေသည့် ပြည်သူ့လွတ်တော်တစ်နေရာကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ သန်ခေါင်စရင်းအရ ကလောမြို့နယ်တွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၉၀၀၀ ဦးရှိသည့်အနက် ဓနု- ၅၄၅၂၃ ဦး၊ ဗမာ-၃၆၈၁၀ ဦး၊ ပအိုဝ်း-၃၀၂၉၂ ဦး၊ တောင်ရိုး-၂၁၀၂၆ ဦး၊ ပလောင်-၃၂၅၀ ဦး၊ ရှမ်း-၉၃၅ ဦး ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကလောမြို့နယ်တွင် အသက် (၁၈)နှစ်အထက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ ၉၂၂၅၆ ဦးရှိကြောင်း သန်ခေါင်စရင်းအရ သိရသည်။
PNO သည် ၁၉၉၁ တွင် န၀တ စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ရှရှားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် SSA-N ကို ရုရှားလုပ် တိုက်လေယာဉ်နှင့် ခြိမ်းခြောက်နေ။
Posted by Bwarsara | Monday, August 29, 2011 |0comments »
ကျေးသီးမြို့နယ်အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားနေသော SSA-N တပ်မဟာ(၁)သည် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကို လက်မခံသဖြင့် အစိုးရစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲပြင်းထန်သည့်နေရာ၌ ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရုရှားလုပ် MIG-29 ဂျက် ခန်းမှန်းလို့ရသည့် တိုက်လေယာဉ် (၂)စင်းနှင့် နောက်ထပ်တဖြန် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ ဂျက်အမျိုးအစား လေယာဉ် (၄)စင်းဖြင့် ပျံသန်းခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟု ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရတပ်နှင့် SSA-N တိုက်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်သည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၃၀၀၀၀ ရှိသည်ဟု ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားကို သိရသည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့် နေရာများအနက် ကျေးသီးမြို့နယ်သည် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကျေးသီးမြို့နယ်မှ ၀မ်ဟုတ်ရွာဟောင်း၌ တန်သန်းပေါင်း ၃၇ ဖုံးလွမ်းသည့် ကျောက်မီးသွေးသိုက်ကို စတင်တူးဖော်နေပြီး အမှတ်(၅)သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်)အတွက် နှစ်ပေါင်း ၇၅ နှစ်စာ အသုံးပြုမည်ဟု (၂၂ မတ်လ ၂၀၁၀) အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ တည်ဆောက်ပြီးလုနီးပါး ပင်းပက် သံမဏီစက်ရုံ လှည့်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်မည့် ကျောက်မီးသွေးလောင်စာစွမ်းအင်များသည် ကျေးသီးတွင် တည်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးသီးမြို့နယ်တွင် လှုပ်ရှားနေသည့် SSA-N ကို ချေမှုန်းရေးနှင့် ၀မ်ဟုတ်ကျောက်မီးသွေးသိုက်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ရုရှားလှုပ် MIG-29 ဂျက်ဖြင့် SSA-N ကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် မြို့တော်တောင်ကြီးအနီးရှိ ပင်းပက်သံရိုင်းသတ္တုသိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး သံရိုင်းသတ္တုသိုက် ဖြစ်သည်။ ထိုသံရိုင်းသတ္တုသိုက်ကို တူးဖော်သန့်စင်ရန်အတွက် ရုရှားနိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သော Tyazhproexportက အဓိကရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည်။ ပင်းပက်သံမဏိစက်ရုံအတွက် လိုအပ်မည့် စွမ်းအင်ကို ကျေးသီးကျောက်မီးသွေးအပြင် အခြားစွမ်းအင်ဖြစ်သော သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို မကွေးမှ ပင်းပက်သို့ ၆ လက်မ ၈ လက်မရှိ ပိုက်လံးများဖြင့် သွယ်လာပြီး အသုံးပြုမည်ဟု သိရသည်။ ထို့အပြင် တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ထုတ်စက်ရုံနှင့် ကျိုင်းတောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုလည်း အသုံးပြုမည်ဟု သိရသည်။
ထိုစက်ရုံတည်ဆောက်ပြီးပါက သံရိုင်းသတ္တုသန့်စင်ရန်အတွက် နမ်းတဖက်ချောင်းကို ပိတ်ပြီး အချင်း(၂၁)လက်မရှိသော ပိုက်လုံးကြီးနှစ်လုံးဖြင့် ချောင်းရေကို စက်ရုံသို့ စုပ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ စက်ရုံမှ ထွက်လာမည့် ရေထုညစ်ညမ်းမှုများကို နမ်းတဖက်ချောင်းသို့ ပြန်ပြီးလွှင့်ထုတ်မည့် အချင်း(၃)ပေခန့် ရှိသော ပိုက်လုံးကြီးလည်း သပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဟိုပုံးချိုင့်ဝှမ်း၏ အဓိကချောင်းမကြီးဖြစ်သော နမ်းတဖက်ချောင်းသည် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ် စသည့်မြို့နယ်များ၏ ဒေသအစိတ်အပိုင်းတချို့မှ နေထိုင်သည့် လူဦးရေ ၃၅၀၀၀ ခန့်သည် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၊ လှေဖြင့်ခရီးသွားလာရေး၊ ငါးဖမ်းလုပ်ကိုင်ရေး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး စသည်ဖြင့် အသုံးပြုနေသည်။ ပင်းပက်သံမဏိစက်ရုံ လှည့်ပတ်ပါက ချောင်း၏ အောက်ပိုင်းကို မှီခိုသော ဒေသခံပြည်သူများသည် စက်ရုံမှ ထွက်လာမည့် ညစ်ညမ်းသောရေထုမှ အဆိပ်အတောက်များကို ရင်ဆိုင်ရမည်မှာ ဧကန်အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။
သံသတ္တုရိုင်းကို သန့်စင်မည့်စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော မြေယာများကို ဒေသခံများ ပိုင်ဆိုင်သော စားကျက်မြေနှင့် ထင်းတောမြေ ခန့်မန်းခြေ ဧက ၆၀၀၀ ခန့်နှင့် စိုက်ပျိုးမြေယာ ၉၅၃.၆၄ ဧကကို အဓမ္မသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ပုံစင်ရွာ၊ ကံကော်ရွာနှင့် နောင်ကာကယ်ရွာနေ မိသားစု (20) ကိုလည်း အဓမ္မရွေ့ပြောင်းစေခဲ့သည့်အပြင် စက်ရုံတည်ဆောက်သည့်မြေယာပေါ်တွင် ယခင်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ရှေးဟောင်းစေတီ သုံးဆူကိုလည်း ဖြိုချဖျက်စီးခဲ့သည်။
၂၀၀၉ တွင် ပင်းပက်သံရိုင်းတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံးက သုတေသနလုပ်ပြီး “အနာဂတ်ကို လုယူဖျက်စီးခြင်း” ဆိုသည့် အစီရင်ခံစာတအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပင်းပက်တောင်တွင် ပြုလုပ်နေသော စီမံကိန်းကြီးသည် သံရိုင်းသတ္တုသန့်စင်သည် သာမက ယူရေနီယံပါ တူးဖော်သန့်စင်မည်ဟု စက်ရုံဝန်ထမ်းနှင့် ဒေသခံများကြားတွင် ကောလဟာလ ပြောဆိုနေကြသည်။
Posted by Bwarsara | Tuesday, August 23, 2011 | သတင်း |0comments »
ဧရာဝတီ Tuesday, 23 August 2011 19:25
ယနေ့ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ နှစ်ပေါင်း ၂၄ နှစ် ကျော်ကြာမှ ပထမဆုံး ကြေညာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေ ရသုံးခန့်မှန်းငွေစာရင်း တင်သွင်းရာတွင် ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ခုနှစ် စာရင်း အတွက် ကျပ် ဘီလီယံပေါင်း ၂ ထောင်ကျော် လိုငွေပြနေကြောင်း သိရသည်။
နှစ်စဉ်အလိုက် ကြေညာရသော ရသုံးမှန်းခြေစာရင်းအရ နိုင်ငံတော် တရပ်လုံး၏ ရငွေ စုစုပေါင်း ပမာဏမှာ ၅၇၈၁. ၇၃၈ ဘီလျံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း သုံးငွေ ပမာဏမှာ ၇၉၈၃.၁၈၈ ဘီလျံ ဖြစ်သည့်အတွက် ဘတ်ဂျတ် (ရသုံးမှန်းခြေ) လိုငွေပြမှုသည် ၂၂၀၁. ၄၅၀ ဘီလျံ ဖြစ်နေသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၁၁ ကို ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်တိုးက ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လိုငွေပြမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြမှု မရှိပေ။
“နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းက ၆ ကျပ်နဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ ဖွင့်ထားလို့ အခုလို လိုငွေပြနေတာလို့ ပြောတယ်။ တိုင်း၊ ပြည်နယ် အားလုံး လိုငွေတွေပဲ ပြနေတယ်။ လိုငွေ မပြတာ တခုမှမရှိဘူး” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် တက်ရောက်ခဲ့သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ပြောသည်။
“နေ့လယ်ပိုင်း ၁ နာရီမှာ စတဲ့ အချိန်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မဲဆန္ဒနယ် ၁၁ က ဦးတင်ယုက မေးမြန်းတယ်။ တိုင်း၊ ဒေသကြီးများနဲ့ ပြည်နယ်များရဲ့ ဆေးရုံများမှာ ဆေးဝါး မလုံလောက်စွာဖြင့် ပြည်သူလူထုအား ကျန်းမာရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တာကို မေးပါတယ်၊ အဲဒါကို ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက ဒေါက်တာဖေသက်ခင်က ရှင်းပါတယ်။ ဘတ်ဂျက် အခြေအနေအရ လုပ်မပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းပေါ့” ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦး ဖြစ်သူ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ အခမ်းအနားကို အာဏာပိုင်များ ၀င်ရောက်စစ်ဆေး
Posted by Bwarsara | Monday, August 22, 2011 | သတင်း |0comments »
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ ဒဲဉ်သီးဗွေကွင်း(ခ) ပအိုဝ်းအမျိုးသားဘော်လုံးကွင်းတွင် အခမ်းအနားတခု ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် Eco care အဖွဲ့၊ NLD လူငယ်၊ ရှမ်းလူငယ်၊ ပအိုဝ်းလူငယ်၊ ကယန်းလူငယ်၊ ဗုဒ္ဓလူငယ်များ၊ ကမ္ဘောဇစာကြည့်တိုက်အဖွဲ့မှ လူငယ်များ၊ အောင်ဗန်းစာကြည့်တိုက်အဖွဲ့မှ လူငယ်များနှင့် ရန်ကုန်မှ လူငယ်အဖွဲ့ဖြစ်သော Youth Cycle တို့ စုစုပေါင်း လူငယ် ၅၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ဟု သိရသည်။
“တက်ရောက်လာကြတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့အသီးသီးက မိမိတို့အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို တင်ပြဖလှယ်တယ်။ စာပေဆိုင်ရာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများလဲ ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြတယ်။ ဦးဆောင်ကျင်းပသူ လှသောင်းကတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်နှင့် အကျင့်စရိတ္တများကိုလည်း ဟော်ကြားဆွေးနွေးခဲ့တယ်” ဟု အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်သည့် လူငယ်တစ်ဦးက ပြောပြသည်ကို သိရသည်။
ထိုအခမ်းအနားကျင်းပချိန်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာတွန်းမှုကြောင့် ကွင်းထဲရှိ အဆောက်အဦးထဲတွင် ကျင်းပခဲ့ရသည်ဟု အဆိုပါလူငယ်က ထပ်ပြောပြခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ ကျင်းပနေစဉ် မွန်းလွဲပိုင်း ၃း၃၀ နာရီ ၀န်းကျင်အချိန်တွင် “စ” သုံးလုံးအဖွဲ့က လာရောက်စစ်ဆေးပြီး တနာရီအကြာတွင် Special Police from No.2 Taunggyi Police station (SP2) နှင့် PNO အဖွဲ့က ထပ်ရောက်လာပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု ပြုခဲ့သည်။
“SP2 က ထရံမှာ ကပ်ထားသည့် လူငယ်အသီးသီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကင်မရာနှင့် ရိုက်ယူတယ်။ တချို့လူငယ်အဖွဲ့က စာရွက်ဖြင့် မိတ္တူကူးထားတဲ့ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကို ပေးသွားခဲ့တယ်။ တက်ရောက်လာတဲ့ လူငယ်တချို့က အတွေ့အကြုံရှိတော့ မကြောက်လန့်ကြပေမယ့် တချို့တော့ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့ ကြောက်လန့်ကြတယ်” ဟု ထိုအခမ်းအနားကို တက်ရောက်သည့် ပအိုဝ်းလူငယ်တစ်ဦးက ပြန်ပြောပြသည်ကို သိရသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပုဒ်မ ၃၅၄ တွင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် မိမိတို့ ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် ရေသားဖြန့်ဝေခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် စသဖြင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
Posted by Bwarsara | Tuesday, August 09, 2011 | သတင်း |0comments »
၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၈)ရက်နေ့ မနက် (၁၀)အချိန်တွင် ပအိုဝ်းဆရာတော် အဂျန်ပန်ယာ (ခ) ဗွေးဗွန်ပညာ သည် သက်တော် (၅၈) ၀ါတော် (၃၈)ဖြင့် ချင်းမိုင်မြို့၊ တလတ်ကတ်လုံဈေးအနီးရှိ ထေမ့်စဘန်ဆေးရုံပေါ်တွင် ဆီးချိုနှင့်ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ သြဂုတ်(၉)ရက်နေ့ နေလယ်ပိုင်း (၁၂)နာရီအချိန်တွင် ဆရာတော်၏ ရုပ်ကလပ်ကို ဆေးရုံမှ ၎င်းကျောင်းဖြစ်သော ၀ပ်နောင်ခံဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ပြန်ပင့်လာခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကို အဆိုပါကျောင်းတွင် ရက်ပေါင်း (၁၀၀)ထားပြီးမှ သင်္ဂျိုလ်မည်ဟု သိရသည်။